Kheladi - इन्जाघीको काँध कति बलियो ?
इन्जाघीको काँध कति बलियो ?
असोज ८, २०७८ २१:३०
आँधी/तुफान आउन लागेको थाहा पाएपछि चराले पनि सुरक्षित स्थान खोज्न थाल्छ । किनभने उसलाई थाहा हुन्छ, आँधी/तुफान रोक्न सकिँदैन ।
त्यस दिन इन्टर मिलान बोलोग्नाका सर्बियाली प्रशिक्षक सिनिसा मिहाज्लोभिचका लागि आँधी/तुफानसरह बन्यो । मिहाजलोभिचलाई थाहा थियो, इन्टरलाई रोक्न सकिँदैन ।
सेप्टेम्बर १८ मा इन्टरसँग भिड्नुअघि बोलोग्नाले लगातार दुई क्लिन सिट राखेको थियो । त्यही भएर मिहाजलोभिचलाई पत्रकारले सोधे, ‘बोलोग्नाले इन्टरसँग पनि क्लिन सिट राख्न सक्छ ?’
मिहाजलोभिचको जवाफ थियो, ‘यसबारे कुरा नगरौं । अन्य प्रश्न छन् भने सोध्नुस् । किनभने यस्तो प्रश्नले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । भाग्यवश हामीले दुई खेलमा गोल खाएनौं । हामी चाहन्छौं, भाग्यले हामीलाई अरू खेलमा पनि साथ देओस् ।’
मिहाजलोभिचले शंका गरेजस्तै भयो । उनको टिमविरुद्ध इन्टरले ६ गोल गर्यो । इन्टरको अग्रपंक्ति बोलोग्नाका लागि हुरी साबित भयो । लाउटारो मार्टिनेजले गोल गर्दा ६ मिनेट पनि बितेको थिएन । त्यसपछि रक्षक मिलान स्क्रिनियारको पालो आयो । तेस्रो गोल गरे निकोलो बरेलाले । मार्टियस भेसिनोले पनि गोल गरे अनि अन्तिमका दुई गोल इडेन जेकोले थपेका थिए । बोलोग्नाबाट एक गोल फर्काउने भाग्यमानी खेलाडीचाहिँ आर्थर थिएटे रहे ।
खेलपछि मिहाजलोभिचको भनाइ थियो, ‘हामी अभागी साबित भयौँ । पाएका मौकामा पनि गोल भएन ।’ उनले भनेझै बोलोग्नाले केही मौका पाएकै हो । विशेषगरी पहिलो हाफमा । तर इन्टरका कप्तान तथा गोलरक्षक समिर हान्डानोभिच आफ्नो क्षेत्रमा बलियो रहे ।
इन्टरका प्रशिक्षक सिमोन इन्जाघीका केही विशेषता छन् । उपलब्ध खेलाडीअनुसार रणनीति बनाउन उनी खप्पिस छन् । विपक्षी टिमलाई झुलाउने, स्पेस बनाउने र तीव्र गतिमा काउन्टर अट्याक गर्ने । इन्जाघीको टिमले यही शैलीमा खेल्छ ।
यस्तै विशेषताले गर्दा इन्जाघीलाई एन्टोनियो कोन्टेको स्थानमा नियुक्त गरिएको हो । हुन त यी दुई प्रशिक्षकमा केही समानता छन् । जस्तै, रक्षापंक्तिमा तीन सेन्ट्रल डिफेन्डर खेलाउने शैली अनि स्ट्राइकरको गतिको उपयोग गरी काउन्टर अट्याकको योजना बुन्ने ।
उनै कोन्टेको नेतृत्वमा इन्टरले गत सिजन इटालियन सिरी ‘ए’ जित्यो । उनी हिँडेपछि आइपुगे इन्जाघी । च्याम्पियन इन्टरलाई टिममा पूरै परिवर्तन चाहिएको थिएन । स्थिरतामात्रै इन्टरको चाहना हो । इन्जाघीको मुख्य जिम्मेवारी च्याम्पियन टिममा स्थिरता कायम गर्नु छ ।
इन्जाघी आफैं पनि कमजोर प्रशिक्षक होइनन् । लाजियोमा रहँदा उनले तीन घरेलु कप जिते । त्यहाँ करिब आधा दशक रहेपछि उनले सोचे, अब करिअरमा नयाँ चुनौती आवश्यक छ । त्यसपछि उनले इन्टर रोजे वा इन्टरले इन्जाघी रोज्यो । फेरि इन्टर जाँदा इन्जाघीलाई कोन्टेको भन्दा एकतिहाइ कम तलब दिइएको छ ।
इन्टर स्थिर रहन सक्छ भन्नेमा धेरैको शंका छ । एक त कोन्टेजस्ता प्रभावकारी प्रशिक्षकले क्लब छाडेका छन् । अनि स्टार खेलाडी रोमेलु लुकाकुले पनि चेल्सी रोजिसकेका छन् । गत सिजन प्रभावकारी साबित भएका असरफ हाकिमी पनि सान सिएरोमा छैनन् ।
युभेन्ट्समा मासिमिलिनो एलेग्री फर्किएकाले पनि सिरी ‘ए’ उपाधि टुरिन जान्छ भन्ने धेरैको अनुमान हो । तर विस्तारै त्यस्तो अनुमान असफल हुने बाटोमा छ । किनभने ५ खेल खेलेको इन्टर लिगको शीर्षस्थानमा छ । उता युभेन्ट्स भने खराब लयका कारण रेलिगेसन क्षेत्रमा छ ।
कोन्टेले इन्टरमा जे गरे, त्यसलाई निरन्तरता दिन इन्जाघी तयार छन् वा सक्षम छन् ?
अहिले नै जवाफ दिन गाह्रो छ । तर संकेत सकारात्मक देखिएको छ । केही हदसम्म खेल्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छ । इडेन जेको पारम्परिक सेन्ट्रल फरवार्डका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । जबकि लुकाकु मिडफिल्डमा झरिरहन्थे । अर्को परिवर्तन भनेको खेलाडी संख्या हो । कोन्टे थोरै खेलाडी प्रयोग गर्थे । गत सिजन उही ९ खेलाडी २९ पटक प्लेइङ एघारमा परेका थिए । उनी नयाँ खेलाडीलाई छिट्टै विश्वास गरिहाल्दैन थिए ।
इन्जाघी भने फरक देखिएका छन् । डेन्जेल डम्फ्राइज जस्ता नयाँ खेलाडीलाई सुरुबाटै विश्वास गरिएको छ । डम्फ्राइज यसै सिजनको विन्डोमा इन्टरसँग आबद्ध भएका हुन् । हाकिमी पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लागेपछि डम्फ्राइजलाई खरिद गरिएको हो । डच फुलब्याक पनि हाकिमी जस्तै तीब्र गतिमा खेल्न सक्छन् ।
उता लेफ्ट विंग्स ब्याकमा फेडेरिको डिमार्कोले पनि बलियो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बोलोग्नासँगको खेलमा उनले दुई अवसर जुराएका थिए । ६ वर्षकै उमेरबाट इन्टरको एकेडेमीसँग जोडिएका डिमार्कोले यसअघि सिनियर टिममा मौका पाइरहेका थिएनन् । इन्जाघीले भने उनलाई विश्वास गरेका छन् । विंग्स ब्याकबाहेक उनी सेन्ट्रल डिफेन्डर भएर पनि खेल्न सक्छन् ।
इन्जाघी इन्टरमा धेरैभन्दा धेरै खेलाडीले मौका पाऊन भन्ने चाहन्छन् । च्याम्पियन्स लिग तथा घरेलु कपलाई मध्यनजर गर्दै उनले बेन्चका खेलाडीलाई खेल्ने मौका दिइरहेका छन् । यसो गर्न उनीसँग सुविधा छ । किनभने उनले टिममा हाकान केलानगोलु, कार्लोस जोक्विन कोरिआ जस्ता खेलाडी थपेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनलाई आरोप लाग्छ, धेरैभन्दा धेरै खेलाडी परिवर्तन गरिएको भनेर ।
जेहोस्, सिरी ‘ए’ को सुरुआती खेलहरूमा इन्जाघीको रणनीतिले काम गरेको छ । बोलोग्नाविरुद्धको खेल यसैको एउटा उदाहरण हो । प्रश्न यतिमात्र हो, के इन्जाघीले बलियो सुरुआतलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ?